Safarka Obama ee UK & mucjisooyinka uu wato (warbixin la yaab leh+Sawiro) – SBC
Safarka Obama ee UK & mucjisooyinka uu wato (warbixin la yaab leh+Sawiro)
Madaxweynaha Mareykanka Barack Xuseen Obama ayaa beri booqasho uga bilaamanaysaa magaalada London ee caasimada Boqortooyada UK, waxaa safarkiisa ku wehlisa marwada koowaad ee Mareykanka Michelle & ugu yaraan 500 qof oo isagu jira maamulka, saraakiisha aqalka Cad, ciidamo gaar ah oo amaankiisa loogu tala galay iyo waliba dhakhaatiir.
Safarka Madaxweyne Obama uu ku imaanayo magaalada London oo ka mid ah caasimadaha ugu faca weyn aduunka isla markaana dhanka amaanka aad ugu wanaagsan, looma maleeyo in Obama uu magaaladaasi booqanayo, waxayse u egtahay in uu booqanyo magaalo dagaal iyo xabad looga baqayo sida Kapul, Baqdaad ama Muqdisho marka laga hadlayo taxadarka dhanka amaanka ee uu wato safarka Obama ee magaalada London.
Mid ka mid ah Ilaalada Madaxweyne Obama
England waxaa ka dhisan ciidan ka mid ah ciidamada dunida ugu tababarka wanaagsan marka laga hadlayo dhanka mukhaabaraadka & hawlgalada gaarka ah waa ciidamada SAS, waxaa sidoo kale ka dhisan ciidanka Scotland Yard, balse taasi uma muuqanayso in ay kalsooni ku qabaan saraakiisha Obama ee amaankiisa qaabilsan waxaana madaxweyne Obama la socda 200 askari oo si gaar ah amaankiisa u qaabilsan.
Madaxweyne booqanaya wadan la mid ah UK in uu horey u soo wato 200 ciidan ilaalo ah wali ma dhicin, waxaana arintan si weyn u hadal haysa saxaafada wadanka Britain, taasina waxay muujinaysa shakiga wadamo badan oo Mareykanku ku mid yahay ay ka qabaan UK in uu yahay wadan amaankiisu uu halis yahay isla markaana ay ku xoogan yihiin waxa loogu yeero xagjiriinta.
Ciidamada 200 ee Madaxweyne Obama la socda intooda badan way hubaysan yihiin oo hadii dagaal ama rabsho dhacdo waxay uga jawaabayaan si deg deg ah, kuwa waa sirdoon, kuwana waxay si gaar ah u qaabilsan yihiin badbaadadiisa si shakhsi ah. Sheekada kale ee xiisaha leh waxay tahay Madaxweyne Obama cagta ma saari doono baabuur laga leeyahay England wuxuu wataa baabuurkiisa gaarka ah ee amaankiisu aadku u sareeyo, gaarigaasi waxaa baabuur ay sameysay shirkada caanka ah ee GMC ( Motors Cadillac) waa baabuur limousine ah gabi ahaantisna waa bulletproof oo xabado ma karto, iskaba daa xabadee waxaa loo sameeyey qaab casri ah oo xitaa bambooyinka uu ka digayo.
Baabuurka Obama & waxyaabaha mucjisada ah ee uu leeyahay
Baabuurku wuxuu ku fadhiyaa qiimo gaaraya 1 milyan oo doolar, taayarada waxaa ku rakiban qalab loogu tala galay in hadii ay wax ku dhacaan ama qarxaan ama la dalooliyo uu ku baxsan karo gaarigu, wuxuu leeyahay telefoon Satellite ah oo toos ugu xiran aqalka Cad (White house) iyo waaxda gaashaandhiga (The Pentagon).
Gaariga waxaa ku rakiban kaamirooyinka loo yaqaan night vision oo suurtagal ay u tahay in ku socdo meel mugdi ah oo aan wax nal aanu ka jirin, isagoon shidan layrarka ku xiran gaariga. Wuxuu leeyahay qalab loogu tala galay inay iska caabiyaan in uu gubto & bam lagu tuuro, waxaa ku rakiban qalab dhanka caafimaadka ah oo waliba dhiig hadii uu u baahdo madaxweynaha in lagu shubo meel kale aan laga dooneyn, iyadoo uu leeyahay tuulka gargaarka deg degd eg ah.
Baaburku waxaa ku rakiban sunta dadka ilmada ka keenta, (Tear Gas), waxaa kale uu qafiskiisu ka sameysan yahay aalad hadii si toos ah loo hirdiyo aanu waxba diismeyn ama buusmeyn qafiska gaariga ama body-ga.
Kursiga dambe oo afarta qof qaada wuxuu leeyhaay botom hoos iyo kor u kici karaya waxaana haysta remote-ka Madaxweyne Obama oo kaliya.
Qaybta shufeerka ama darawalka gaariga waxay leedahay qalab xadiid ama bir ka sameysan oo xabadu karin, isla markaana albaabada waxay le’egyahay balaar ahaan daaqada Pilot diyaaraeed (cabin door) diyaaradeed gaar ahaan diyaarada 757 ah.
Waxaa sidoo kale gaariga ku rakiban qalab loogu tala galay in hadii dab ka kaco uu is damin karo, iyadoo uu leeyahay oxygen u gaar ah oo loo adeegsado hadii ay timaado xaalad deg deg ah.
Muraayadaha gaariga waa kuwa iska celin kara xabada ama bambooyinka, muraayadaha daaqaduhu waxay furmaan oo kaliya 3 inchi oo loogu tala galay in darawalku (shufeerku) kala hadlo ciidamada amaanka & kuwa sirdoonka ee dhinac ordayaya.
Darawalka gaariga wuxuu ka tirsan yahay ciidamada khaaska ah ee sirdoonka, waxanaa la sheegay in uu haysto tababarka ugu sareeye ee shufeer ama darawal leeyahay isla markaana uu ka bixi karo xaalad kasta oo deg deg ah.
Garaangirta ama Isteerada baaburka laga kaxeeyo waxaa ku rakiban qalanka GPS (Global Position System) kaasi oo lagala socon karo aqalka cad jiiro kasta ama socod kasta oo uu gaarigu sameyo.
Intaasi oo kaliya kuma koobna madaxweyne Obama sugitaankiisa dhanka waxaa gaarigiisa hareeraha ka socon doono 20 baabuur iyo mootooyin ama dhugdhugley ay wataan ciidamada Booliiska & kuwa kale ee amaanka.
Xagee degi doonaa Obama maxaase la yaab leh oo khuseeya arintan ?.
Madaxweyne Obama & marwadiisa waxay degi doonaan qasriga boqortooyada UK ee ku yaal bartamaha magaalada London, gurigaasi oo lagu magacaabo Buckingham Palace waxaa degan Boqorada UK.
Obama waxaa la dajin doonaa qayb ka mid ah Buckingham Palace oo lagu magacvaabo Belgian Suite, waxaa qaybtan hogaamiyeyaasha caalamka ee la dajiyey ka mid ah Nelson Mandela madaxweynihii Koonfur Afrika & JF Kennedy madaxweynihii la diley ee Mareykanka.
Waxaa la yaab leh in qasriga Boqorada UK oo ka mid ah meelaha ugu amaan adkeynta badan in saraakiisha amaanka madaxweyne Obama ay codsadeen in qasigaasi laga saaro badi shaqaalaha Boqorada, sidoo kale waxay codsadeen inay ku xirtaan qaybta la dajinayo Obama daaqado ay wataan oo aanay xabadu ama bambadu karin oo nooca loo yaqaan double glass oo ah muraayado is dulsaaran.
Isgaarsiinta, caafimaadka & ilaalada khaaska ah ee Obama
Kooxda Obama la socotaa waxay wataan qalabkooda isgaarsiinta eeu gaarka ah mana adeegsan doonaan isgaarsiin aan taasi aheyn, sidoo kale waxaa la yaab leh Madaxweyne waxaa la socda sarkaal military oo sida boorso ay ka buuxaan furayaasha ama lambarada sirta ah ee hubka Nukliyeerka Mareykanka, gaar ahaan furayaasha hubkaasi lagu qarxiyo ee loo yaqaan (America’s nuclear missile launch codes).
Ilaalada Madaxweyne Obama waxay iyagoo hubaysan ku dhex socdaan, ku sare socon doonaan oogada & gudaha aqalka boqorada, iyagoo sidoo kale adeegsan doonaa sariiro military oo ay wataan.
Waxaa sidoo kale kooxda la socotaa Madaxweyne Obama ay dhisan doonaan Isbitaal yar oo u gaar ah oo wata dhamaan qalabkiisi, sidoo kale waxaa la diyaarinayaa hab dhiig loogu shubi karo Madaxweynaha hadiiba ay dhacdo in xaalad deg deg ah timaado.
Dhacdadan waxaa la sheegay in ay ka yara badalantahay sanadkii 2003-dii oo Madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush uu joogay aqalka boqorada UK ee Buckingham Palace, xiligaasi oo kooxda Bush ay codsadeen in la badalo 760 muraayadood oo ku yaal qariga, iyagoo sidoo kale dhulka dhigay oo jarey dhamaan geedihii guriga ku yiil maadama diyaaradaha khumaatiga u kaca ee kooxda Bush wadatey ay aad u waa weynaayeen.
Diyaarada Obama ku safarayo
Madaxweyne Obama UK wuxuu ku safarayaa diyaarad Boeing 747-200B, waana Air Force One ee ay ku safraan madaxweyneyaasha Mareykanka, waa diyaarad laba dabaq ka kooban, waxay leedahay xafiisyo, qaybo jiif, Isbitaal, goob lagu cuneeyo, Tiyaatar & waliba meel lagu sameeyo jimicsiga gym. Diyaaradan waxaa sidoo kale ku rakiban qalab isgaarsiin oo uu madaxweynuhu ku hagayo hawlmaalkeediisa caadiga ah iyo xaaladaha deg deg ah.Diyaarad halkii waxay ku duulaysaa qarash lacageed oo gaaraya 150 kun oo doolar halkii saac ee ay hawada ku jirto. Talaabadan sida aadka ah loogu xoojinayo amaanka Madaxweyne Barack Obama gaar ahaan safarkiisa UK waxaa lagu macneeyey inay tahay si looga hortago hadiiba ay dhacdo isku day lagu khaarijiyo oo ka dhalan kara aargudashada Al-qaacida ee la xiriirta dilkii hogaamiyahoodii Cusaama Bin Ladin oo madaxweyne Obama uu qirtey in uu isagu toos u amray, iyadoo taasi Mareykanku u arkayaan dakano u taal Madaxweyne Obama.